Imaphi amashidi okulala anethezeke kakhulu?
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Okuthunyelwe izivakashi » Imaphi amashidi okulala anethezeke kakhulu?
Amashidi e-Premium angenza ukulala kwakho kube ngcono, kuyilapho amashidi amancane konakalisa ngokushesha ukujabulela isikhathi sokulala. Imibhede nezingubo zokulala azikhululekile. Okufanelekile kufanele kube okuhlala isikhathi eside, kuthambile, ku-hypoallergenic, futhi amelane nemibimbi. Kunengqondo kakhulu ukutshala kanye emibhedeni yekhwalithi ephezulu eyenziwe ngezinto ezifanele kunokuthenga ezimaphakathi njalo.
Yiziphi izinto esizisebenzisayo?
Yiziphi izinto ezisetshenziselwa ukulala kwekhwalithi? Kumelwe zibe ngokwemvelo, ziqine, futhi ziphephe empilweni. Ukusetshenziswa kwe-Linens ne-Hutch:
i-microfiber ethambile kakhulu futhi ehlala isikhathi eside;
izindwangu ezibushelelezi ze-bamboo;
100% ukotini wemvelo.
Microfiber amasethi amashidi okunethezeka zinhle kakhulu kubantu abahlukunyezwa yizinto ezingezwani nomzimba ezahlukahlukene futhi zinhle nasenkathini ebandayo njengoba zifudumala kahle futhi zihlinzeka ngokujikeleza komoya okuhle. Le nto imelana nokwakhiwa kwamaphilisi, i-puffs, ayishwabanisi, futhi igcina ukubukeka okuhle isikhathi eside. Izinto zokulala zoqalo zincane, zibushelelezi njengosilika, zimunca umswakama kahle, ziyaphefumula, futhi zibukeka zizinhle. Amashidi ombhede enziwe ngale nto afanele izingane. Amashidi kakotini alungele ukusetshenziswa kwansuku zonke, alungele isikhumba, futhi aqinile.
Amashidi e-Flannel bed
I-Flannel ingenye yezinto ezithandwa kakhulu zamashidi ombhede. Izinzuzo ze amashidi e-flannel:
ezenziwe ngezinto zemvelo;
i-hypoallergenic, ayiqoqi uthuli, futhi ayibangeli ukusabela okweqile;
ibamba umswakama futhi ijuluke kahle;
ukumelana nokugqoka futhi kuzohlala iminyaka eminingi ngokunakekelwa okufanele;
ethokomele futhi emnandi esikhumbeni.
Nokho, iflaneli inemibi. Kufanele igezwe emazingeni okushisa aphansi ukuze igweme ukuncipha kanye nokuguqulwa kwendwangu. I-Flannel yoma isikhathi eside. Akubalulekile kangako ngemva kokugeza, kodwa kungcono ukushiya umbhede ungamboziwe kuze kube yilapho amashidi omile. Susa amabala emashidini ombhede wefulaneli ngaphambi kokugeza umshini; kungenjalo, zingahlala phakade.
Izincomo ezijwayelekile zokunakekelwa kwemibhede
Kufanele njalo uwashe amashidi akho ombhede ngaphambi kokuwasebenzisa okokuqala; lokhu kuzohlanza, kulungise umbala, futhi kuthambisa indwangu. Vula amakhava nama-pillowcase ngaphakathi ukuze uhlanze amakhona othuli. Faka ishidi ngaphakathi kwekhava ye-duvet bese uvala uziphu noma izinkinobho. Geza amashidi anemibala ngokwehlukana nabamhlophe. Hlola izinga lokushisa lokugeza. Le mithetho elula izokusiza ukuthi welule impilo yezingubo zakho zokulala. Amalineni kanye ne-Hutch ikufisela amaphupho amahle emashidini ombhede athambile nanethezekile.
Ingabe Umphathi Wendawo Yakho Kufanele Agunyazwe?
Amathiphu Okulungiselela Iholide Elingenalo Ingcindezi